Umtshato kwimbala ye-beige efudumeleyo (ifoto): khetha i-dress beige yomtshato
Ubudlelwane Umtshato Ugqoke umtshato
Ubumnandi benovuyo olumnandi: khetha ingubo yomtshato
Umfanekiso wentombazana enothando, ehlangene phantsi kwesithsaba, kufuneka ucingisise ngokucokisekileyo. Kule meko, zonke iinkcukacha zibalulekile-ukusuka kwizinto eziphathekayo, izicathulo, ukugcoba umzimba, ukwenza i-hairstyle kunye nesambatho esihle. Kungenxa yokugqoka umtshakazi okokuqala kuqala ukuqwalasela abahlobo, intsapho kunye nabafotshini. Ngoko ke, ukhetho lokugqoka umtshakazi kufuneka lusetyenziswe kakuhle.
Uninzi lolutsha oluya kutshata alufuni ukugqoka ingubo emhlophe. Abaninzi bacinga ukuba kunzima kwaye bakhethe ingubo yomtshato. Namhlanje lo mbala weengubo uthathwa njengenye yeyona nto iphosakeleyo. Ngendlela, umbala we "ikhofi kunye nobisi" uyisimboli sokuhlanzeka nokungabi namacala.
Umtshato kwimbala ye-beige: ingubo
Kulo xesha kuluhlobo lomtshato wendlovu. Isundu lobuphiswano lubamba ingubo yomlenze, kunye nemihlobiso ngokutshatyalaliswa kwamatye amancinci. Udibaniso olunjalo luya kugxininisa ubuhle bentombi kunye nolutsha. I-Apparel i-airy engaqhelekanga kwaye ilula, ngoko iingubo ezinama-milky zithandwa kakhulu kumtshato wehlobo.
Ukukhetha ingubo yomtshato, unokukhetha ukukhanya, iingubo ezibonakalayo. Nika ingqalelo kwi-dress beige egqibeleleyo ngeentambo.
Izambatho zethunzi elimhlophe zinemiba emininzi:
Impahla yendlovu, ehlotswe ngamatye amancinci, iya kubonakala ibe mkhulu phantsi kokukhanya okubonakalayo. Amatye anakho ukufakwa kuyo nayiphi na imibala, kodwa kwiimeko ezininzi, abafazi bakhetha ukonakala ukuze iingubo zenzeke njengendalo.
Amatye angayihobisa phezulu kwengubo, enze ihombo ngeengubo kunye nezicathulo.
Kunenzuzo ukugxininisa ubuhle bengubo yomtshato ye-beige kunye nezihlangu ezikhethiweyo. Ingaba yintoni enye eneengubo okanye ihlanganiswe nomthunzi weempahla. Kule nqaku, siza kukuzisa kwiimigaqo yokukhetha izicathulo zomtshato.
Imibala ye-beige yokugqoka i-Wedding ikuvumela ukuba uzame nezixhobo zokusebenza. Umbala wekhofi kunye nobisi udibaniswe ngokuthe ngqo kunye naluphi na udidi olufudumeleyo. Intombazana inokugqoka iingubo ze-beige kwaye iqoke imihlobiso emhlophe. Ukukhethwa kwezicathulo ezinesibindi - eziluhlaza okwesibhakabhaka okanye ze-orange zidibanise neengubo kunye nekhwama yombala ofanayo. Umntu ococekileyo, i-shades engummthi - umnquma, igrey, umbala wensimbi kunye nesiliva, iya kuhambelana. Le mibala ingabandakanya izicathulo, i-clutch kunye nemigangatho.
Ukuba umfazi osandul 'ukutshata sele ephupha ngokuya kwithsaba enomxholo obomvu we roses bonke ubomi bakhe, ngoko isigqibo esinjalo siya kulungile - umbala oqaqambileyo ukhangeleka kwibala elihle.
Abantu abathandwayo be-Romantic batusa ukuba bawubone umtshato oyingqungquthela yeentyantyambo zasendle eziqaqambileyo. Amaqabunga e-Cornflow, i-tulips yombala we-milky kunye ne-orange gerberas iya kwenza.
Ukugqoka "idlala", kufuneka ukhethe isitayela esifanelekileyo. Iintyatyambo, ezinemibala emininzi, zixutywe kwaye zifake ngeengubo ezingaphezulu - oku kuya kufuneka zishiywe kanye kanye.
Ukulungiswa kukulungele ukhetho olungabonakali kwaye alubonakali. Ukuba intombazana enhle ikhetha isambatho esiqinileyo sokugqoka, ngoko unako ukuvumela ukubeka izinto ezithile eziyingqondi kwi tone. Gcina iingubo ezintle ezithobekileyo entanyeni - umtya weeparele okanye uluhlu oluncinci "lwegolide."
Iindaba ezilungileyo zabafazi abaza kusasa, ngokunyanisekileyo ukhetha izambatho zomtshato - ingubo ye-beige "uthanda" izinto ezincinci ezincinane - i-shorttic reticule, i-veil elula kunye nezicathulo ezingafaniyo.
Yenza phantsi kwengubo yomtshato
Umbala womlambo uhlukaniswe kwi-shades 2-kubanda kwaye kufudumele. Xa ukhetha umbala wepeyinti yokwenza i-makeup, kubalulekile ukuba ungadluli. Ukugqiba umfanekiso womtshakazi, ukugqoka, i-hairstyle kunye ne-makeup kufuneka kuvumelane.
Intombazana eziliqela kwiiveki ngaphambi kokuba umtshato udibana nomculi wokwenza izinto, umxelele ngombala weengubo, izimbali, izitya kunye nezicathulo. Ukuqonda kuphela ipalali epheleleyo yomtshato, umculi wokwenza izinto uya kukwazi ukukhetha imibala engcono yokwenza.
Ukuhlaziya iqhosha liya kunceda ama-shades angathathi hlangothi. Ukuba intombazana iluhlobo olubandayo, ungasebenzisa umbala obomvu-kubalulekile ukuba ungadluli. Abatshatileyo abasenzela ukuzenzela bangazama i-paige yegolide okanye igolide. Kunokwenzeka ukugxininisa ulutsha kunye nokungabi namacala ngoncedo lwe-fuchsia lipstick, kuphela phantsi kweyodwa imeko - isikhumba sifanele sigqibelele, singenasiphako.
Ukwenza phantsi kweengubo ze-beige, i-mascaras emnyama okanye emdaka, kuxhomekeka kumthunzi wamehlo, afanelekile. Iimvulo kunye nemilomo ingcono ukukhetha i-matte, ngaphandle kokukhanya kunye nonina we-pearl.
Iingubo zomtshato kufuneka zivalwe kwaye zichaneke, zingabi zikhwaza kwaye zingabi zivulekile. Ziziphi ezinye iimpawu ezifanele ziqwalaselwe xa ukhetha ingubo yomtshato, ufunda kweli nqaku.
Ngomtshato kwimbala ye-beige, kubalulekile ukulandela umgaqo owodwa: ugxininiso ekwenzeni isambatho se-beige kuphela emehlweni okanye emlonyeni. Ekubeni akunakwenzeka ukusebenzisa umthunzi womlomo womkhosi womtshato, kungcono ukhethe amehlo. Kodwa emlonyeni uwanele ukufaka ukukhanya okugqithisiweyo kombala we-tea rose.
I-styles for wedding in color beige
Xa udala umfanekiso olula, kubalulekile ukuqwalasela yonke into. Ukukhwabanisa kwengubo yomtshato kufanele kuvumelane nesitayela sokugqoka. Ukuba umhlobiso wakho we-beige ubuhle kwaye ubude, ungazifihla iinwele zakho ngaphantsi kwesigqubuthelo esifutshane kwithoni yokugqoka kwakho. Ngendlela ecacileyo eqingqiweyo, i-hairstyle yeklasi eneengqungquthela ezinkulu kunye neentyantyambo ezintle kwiintloko ziya kuhambelana.
Nazi iimfihlelo ezinjalo ziza kukunceda wenze umfanekiso ohambelana nomtshakazi kwisambatho se-beige.
Musa ukungaxhatshazi kwaye umtshato wakho makakhunjulwe ixesha elide ngeendwendwe zonke!
Ukubambisana: iingubo ezimnandi zabafazi abatshatileyo
Indwendwe enhle: yintoni eya kumtshato womfazi
Ingubo yomtshato elula
Iimeko ezinomdla: iingubo zabafazi abakhulelwe emtshatweni
Ukukhetha ingubo kumfazi oza kutshata
Izinto zangaphandle zomtshato
Isalathisi sesayizi kunye: iingubo zokutshata zomantombazana
Yintoni enokuyenza ngokutya kokutyhefu?
Iingxowa ze inkukhu zucchini
Indlela yokulungiselela umtshato
Ukuphulukiswa kunye nemilingo yemagnesite
Siqala ukutshintsha namhlanje. Indlela eya emzimbeni ophilileyo
Iingcingo zichasene nokukhulelwa
Ukuzala nokulahlekelwa isisindo kuyinto eyinyani, kungeyona inkolelo!
Kutheni abantu besaba iintombazana ezintle?
Ubuhle, ukunakekelwa komzimba, ukunakekelwa kwesithende
Ukulala nokubaluleka kwayo kwimpilo
Inkcazo yezobugcisa: u-Anastasia Volochkova konke ukutyhilwa
Umthunzi okanye ukuthotywa: kwizinwele, emlonyeni nasezikhonkwane
IHososope yowesifazane waseTaurus ngoJuni 2017
Indlela yokuthetha nomntwana kwisisu
I-Snack kunye nokuzaliswa kwemifuno
I-recipe elula: ikhekhe elula yetshokolethi "isangqa"
Khetha idibaniso elifanelekileyo lemveliso